पार्टी लामो समयपछि एकलय, एकतालमाः केपी शर्माा ओली – Mahilajagaran
पार्टी लामो समयपछि एकलय, एकतालमाः केपी शर्माा ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीको प्रसङ्गमा योगेश भट्टराईजीले राखिसक्नु भएको छ । कुनकुन क्षेत्रमा तयारी कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा मैले फेरि दो¥याइरहनु परेन । हामी दुई सत्रमा महाधिवेशन गर्छौं । उद्घाटन सत्र, जो खुल्ला हुनेछ र व्यापक जनसहभागिताका साथ हुनेछ । अर्को बन्द सत्र, जहाँ प्रतिनिधिहरु हुनेछन् । यस पटक बन्द सत्रमा मुख्य रुपमा नेतृत्व निर्माणको र चयनको काम हुनेछ ।
अब म धेरै कुरा भन्नुभन्दा यो अन्तरक्रिया हो, अहिले मैले राजनीतिक मन्तव्य राख्नेभन्दा सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा महत्व दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेको छु । म साथीहरुलाई आफ्ना प्रश्न, जिज्ञान आदि राख्नु आग्रह गर्न चाहन्छु ।
लोगोका कारणले कतिपयले आलोचना पनि गर्ने गरिएको सुनिएको छ । मलाई यो ठीकै लागेको छ । तपाईंहरुलाई बधाई छ । चितवनमा गर्ने भएपछि गैँडाकै लोगो हुनुपर्छ । तर, यो महाधिवेशन नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन हो भनेपछि अरु विषयमा धेरै नलागिकन, अध्यक्ष तपाईं र्निविरोध त हुनसक्नु भएको छैन । तपाईंलाई एउटा सानो चुनौती छ । अब सबैको ध्यान एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष को हुन्छ भन्ने छ । तपाईंको मनले खाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चाहिँ को छ यसपाली ? महासचिव र अरु सबै पदहरुमा प्रतिस्पर्धा गर साथीहरु भनेर पनि छोड्दिनु भएको भन्ने पनि सुनिएको छ । यसमा तपाईंको राय के छ ? तपाईं प्यानल बनाउने पक्षमा खासै हुनुहुन्न भनेको सुनिए पनि प्यानलमा गएको पनि भनिन्छ नि ?
महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो । गलत व्याख्या गर्नु हुँदैन कि जस्तो लाग्छ । भीम रावलजीले मलाई चुनौती दिनुभएको छैन । तपाईंले उहाँका शब्दहरुप्रति ध्यान दिनुस् । मप्रति उहाँले आदर, सम्मान, माया, स्नेह देखाउनु भएको छ । अलि बढी खट्नु भएको छ, थकाई लाग्यो कि, आराम गर्ने हो कि भनेर । त्यसो भए म उठ्छु भनेर भन्नु भएको छ । होइन ? मैले पनि सुनेँ । उहाँले कुनै चुनौती भन्नु भएको छ ? उहाँले सुझाव दिनुभएको छ । उहाँको स्नेहपूर्ण सुझावबाट म प्रभावित छु । राम्रो हो । यो सुझाव एकखालका मान्छेहरुले निकै मन पराउने खालको पनि सुझाव हो । मैले अध्यक्ष नउठेर विश्राम लिए हुन्थ्यो भन्ने पार्टी बाहिरका केही मानिसहरुको पनि सुझाव छ । त्यस्तो देखिन्छ । तर, रावलजीको त्यो होइन । उहाँले मप्रति अत्यन्तै स्नेहभाव देखाउनु भएको छ । नेकपा (एमाले) लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यसमा कुनै प्रकारको जोरजुलुम, करकाप वा दबाव हुँदैन । मेरो विरुद्धमा उठ्छु भन्छ कसैले, मैले उठ्ने, नउठ्ने टुंगो त गरेको छैन अहिले । मैले उठ्ने टुंगो गरेँ भने, मलाई निर्विरोध छोड्न पनि पाइन्छ । मलाई चुनौती दिन पनि पाइन्छ । मलाई कसैले चुनौती दिएमा त्यसलाई मैले स्वागत गर्छु । त्यसप्रति कुनै नराम्रो मान्नु हुँदैन र निर्विरोध हुन पाएको भए वा ! क्या एमाले निर्विरोध भयो अध्यक्ष भन्ने हुने, चुनौती भयो भने भएन भन्ने, त्यस्तो केही पनि हुँदैन । लोकतन्त्रमा चुनौती स्वाभाविक कुरा हो । स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्छ । र, म यदि उठ्ने भएँ भने मैले कसैलाई नउठे हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्दैन । म एउटा अध्यक्षको पदमा भएको मान्छेले तपाईं नउठ्दिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा सामान्य शब्दमा पनि आग्रह गर्दा दवाब पर्न सक्छ । दवाब दिने कुनै मेरो मनशाय छैन, हुँदैन । त्यसकारण म कसैलाई पनि अलिकति दवाव महशुस हुने खालको कुनै व्यवहार, अभिव्यक्ति केही पनि गर्दिनँ । त्यसकारण मैले उठ्ने, नउठ्ने अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । उठ्ने भएँ भने अरुलाई नउठ्न पनि भन्दिनँ ।
जहाँसम्म हाम्रो विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ । मैले मन पराएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्यो हो, जो या त निर्विरोध हुन्छ सबैले मान्छन् या बढी भोट ल्याएर जित्छ । त्यो सबैभन्दा बढीले मन पराएर जित्छ । महासचिव पनि त्यस्तै हो । या त निर्विरोध हुन्छ या सबैभन्दा बढी भोट ल्याउँछ । त्यो मैले सबैभन्दा बढी मन पराउँछुृ । किनभने कार्यकर्ता, प्रतिनिधिहरुको जुन इच्छा छ, त्यो इच्छा भन्दाबाहिर गएर मलाई यो प्रतिनिधिहरुले छानेको यो पदाधिकारी मन परेन भनेर म उहाँहरुको मताधिकार, महाधिवेशनको गरिमा, उहाँहरुको छनोटको अधिकार, त्यसलाई किञ्चित अनादर गर्न सक्दिनँ । त्यसकारण त्यही मान्छे मैले सबैभन्दा बढी मन पराएको हुनेछ । अगाडि म मन पराएर बस्दिनँ, परिणाम आएपछि म मन पराउँछु । अरुको हकमा पनि मैले भन्ने गरेको छु, पार्टीभित्र समझदारी, सहमति र एकता बहुतै महत्वपूर्ण कुरा हो । यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । तर, यसो गरिरहँदा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अलिकति पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । लोकतान्त्रिक अभ्यास र अधिकारलाई अलिकति पनि नजरअन्दाज नगरिकन यदि सहमति हुन्छ वा प्रतिस्पर्धीहरुका बीचमा सहमति हुन्छ भने राम्रो कुरा हो । मैले अध्यक्षको हिसाबले पनि स्वागत गर्छु त्यस कुरालाई । सहमति भएन र प्रतिस्पर्धा गर्दा जित्छु भन्छ भने पनि म अवसरमा भाँजो हाल्दिनँ । म अध्यक्षको उम्मेदवार भएँ भने पनि त्यही हो । म कसैको अवसरमा भाँजो हाल्दिनँ । म निर्वाचित भएँ भने सबैको अध्यक्ष, सिंगै पार्टीको अध्यक्षको रुपमा मैले व्यवहार गर्नुपर्छ, गर्छु । त्यसकारण यो मन परेको मेरो, यो अर्काको भन्ने कुरा छैन । पार्टीका सबै नेताहरु, कार्यकर्ताहरु मेरो नजरमा उस्तै हो । सबै निकट हुनुहुन्छ ।
नेकपा (एमाले) विभाजनपछि पनि पहिलो पार्टी छ । प्रतिपक्षमा रहेको बेला महाधिवेशन गर्दै छ । यो महाधिवेशनले चितवनबाट देश र जनतालाई दिने सन्देश के हो ? माधबकुमार नेपाललाई तपाईंले नबोलानुको कारण के हो ? निम्ता नदिनुको कारण के हो ?
प्रचण्डले भनिराख्नु भएको छ, केपी शर्मा ओलीले चितवनमा एमालेको महाधिवेशन गरेर मलाई सिध्याउन खोज्यो, उहाँ चितवनमा गएर आफ्नो पीडा पोखिराख्नु भएको छ । चितवनमा तपाईंले महाधिवेशन गर्नुपर्ने कारण के हो ?
तपाईंहरुले प्रयोग गर्ने विद्युतीय भोटिङ मेसिन, त्यसको प्राविधिक आस्पेक्ट के हो ? किनभने त्यसको प्रयोग गरेर गरिएका निर्वाचन पटक पटक विवादित हुने गरेका छन् । यो बनेको कहाँ हो ? यसको गुणस्तरीयता मापन कहाँ भएको हो ?
तपाईंको प्रयत्न चाहिँ र जोडबल चाहिँ पदाधिकारीमा सहमति होस् भन्नेमा हुन्छ कि चुनाव भएर प्रतिस्पर्धाबाट चुनिउन् भन्नेमा हुन्छ ?
अर्को चाहिँ, माधबकुमार नेपाल लगायतलाई पार्टीको रुपमा निम्ता गर्न मिलेन । पार्टीको रुपमा निम्ता गर्न किन मिलेन भने २५ गते हाम्रो पार्टीले अनुशासनहीन क्रियाकलाप, पार्टी विरोधी क्रियाकलाप, विपक्षीसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो सरकार ढाल्ने र विपक्षीको सरकार बनाउने खालका लोकतन्त्रमा नसुहाउने, पार्टी विरोधी र प्रकारान्तरले देशको अहितमा काम गरेको हुनाले साउन २५ गते कारबाही गरेर निष्काशन गरिएको थियो । त्यो कुरा भदौ १ गते संसद सचिवालयमा जानकारी दिइएको थियो । निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यसै दिन जानकारी गराइएको छ । तर पर्खिपर्खिकन निष्काशन गरेका व्यक्तिहरुलाई लिएर चलिरहेको संसद बन्द गरेर मध्यरातमा संसद बन्द गर्ने,भोलिपल्ट बिहान २० प्रतिशतको अध्यादेश ल्याउने काम भयो । अध्यादेशमा ४० प्रतिशत राख्दा अघिल्लो सरकारको चर्को विरोध गरिएको थियो । त्यो चर्कोविरोध २० प्रतिशत वा राखेर गर्दा गरिएन । पहिले अदालतले खारेज गरेको थियो । चलिरहेको संसदलाई १२ बजे राति अन्त्य गरेर अनि बिहान जारी गर्ने कुरा असंसदीय र छलपूर्ण थियो । यी सबै कुराले नेकपा (एमाले ) का विरुद्ध असंवैधानिक, गैरकानूनी, षड्यन्त्रपूर्ण अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप भएको थियो । पार्टी फुटाउने चेष्टा भएको थियो । त्यसकारण माधब नेपाललाई र माधब नेपालले नेतृत्व गरेको, निष्काशित गरेका व्यक्तिहरुको गुटलाई नेकपा(एमाले)ले पार्टी भनेर मान्न सक्ने स्थिति रहेन । पार्टी नै होइन भने पार्टी भनेर निम्ता गर्ने कुरा भएन ।
हामीले सामान्यतया पार्टी बाहेक व्यक्तिहरुलाई, सञ्चार माध्यमहरुलाई निमन्त्रण गरेका छौं । यहाँहरु सबैलाई निमन्त्रणा छ । अरु व्यक्ति व्यक्ति छानेर हामीले त्यसरी निमन्त्रणा गरेका छैनौं । कलाकारहलाई निमन्त्रणा गरेका छौं, सञ्चार माध्यमहरुलाई निमन्त्रणा गरेका छौं । यहाँहरुलाई स्वागत छ, अवश्य पाल्नु होला । अरु व्यक्तिहरुलाई हामीले व्यक्तिगत तवरमा निम्ता गर्ने गरेका छैनौं ।
जहाँसम्म महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गरेकोमा जुन जिज्ञाशा छ, महाधिवेशन कहाँ गर्ने भन्ने समस्या हुने भयो । पछिल्लो पटक प्रचण्ड चितवन चुनाव लड्न जानुभयो । पहिले रोल्पा जानुभयो । रोल्पातिर महाधिवेशन गरौं भने पहिले उहाँ लडेको ठाउँ । सिराहातिर गरौं भने अलिक पछि लडेको ठाउँ । काठमाडौंमा गर्दा उहाँ काठमाडौं पनि चुनाव लडेको ठाउँ । पछिल्लो पटक उहाँ चितवनमा चुनाव लड्नु भयो । हामीले त हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन गरिराखेका छौं । उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, झापा आएर गर्नुस्, तपाईंको पार्टीको महाधिवेशन । कोही चुनाव कहाँबाट लडेको छ भन्दैमा जिल्ला नै उसको हुने र अरुले पाइलो टेक्नै नहुने ? म त्यो बाटो हिँडेर गएँ भने उहाँले भन्न बेर छैन, मलाई सिध्याउन यहीँबाटो हिँड्नु पर्छ उसले ? भनेर । अलिकति ज्यादति हुँदैन र त्यसो गर्दा ? हामी हाम्रो महाधिवेशन गर्दैछौं । नेकपा माले सिपी मैनालीजीको पार्टीले चितवनमा महाधिवेशन गरेर हिँडेकै भोलिपल्ट उहाँले केही मान्छेहरु मलाई सिध्याउन यहीँ आएर महाधिवेशन गर्नुपर्छ ? भनेर रिसाएको देख्दाखेरी सिपीजीलाई भनेको हो कि ? अरुलाई भनेका ठाउँमा, किन बेकारमा हामीलाई तोकेर भनेको छैन होला कि जस्तो लाग्छ मलाई । सिपीजीलाई भनेको हो कि ? हामीलाई नै भन्नखोज्नु भएको हो भने त उहाँसँग हाम्रो कुनै लिनुदिनुको कुरै होइन । उहाँ आफ्नो पार्टी चलाउनु हुन्छ । उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा मैले गरे भन्ने लाग्छ भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा आएर गर्नुस् न उहाँ पनि दमकमा ।
अर्को कुरा, कम्युनिष्टबीच एकताका कुरा जुन छ, कम्युनिष्टहरु एकताबद्ध छन् । बाँकी रहेकालाई एकताबद्ध बनाउँछु । जो कम्युनिष्टका नाममा, कम्युनिष्टको बर्को ओडेका, रामनामी ओडेका,माला पनि जप्दै गरेका तर आँखा चाहिँ अन्तअन्ततिर लगाइ राखेकालाई चाहिँ एकता गर्दिनँ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिवहरु सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईं बस्दिनुस् न भन्नु परोस ्। त्यो विधि एकदम राम्रो हो । त्यसमा सहमति हुनु राम्रो हो । भएन भने चुनाव हुनु राम्रो हो ।कही पनि पदाधिकारीमा पनि त्यहीहो, केन्द्रीय कमिटीमा पनि त्यहीँ कुरा हो । त्यसकारण मैले त्यो घुमाइफिराइ कुनै पनि हिसाबले सहमतिका लागि दवाबको नीति लिन्नँ । लोकतन्त्र भनेर सहमति भन्ने खालको, उक्साउने खालका ेपनि म गर्दिनँ । त्यसकारण यसमा मेरो सन्तुलित नीति रहेको छ । साथीहरुले आफ्नो अधिकारको उपभोग उच्चस्तरमा गरुन ।
महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि कति खर्च लाग्ला?त्यो खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
तपाईंले पार्टीभित्रका असन्तुष्टिलाई ल्याङल्याङ भन्नुभयो । फेरि ल्याङल्याङ अर्को जन्मिने हो कि ?फेरि ती कुराहरु जन्मिने हुन् कि भन्ने खतराहरु पनि छ, ती खतराहरु कत्तिको देख्नु भएको छ यहाँले ?
तपाईंहरु महाधिवेशनको रौनकमा लाग्दा सर्वोच्च न्यायीक निकाय आन्दोलनको बन्धक बन्नपुगेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले यो विवादलाई सुल्झाउनका लागि कस्तो कदम चाल्दैछ ?
म तपाईंहरुलाई भन्न चाहन्छु, अब ठूलो परिवार भएपछि खानाखर्च नै ठूलो हुन्छ । चामल, दाल, सब्जी नै धेरै लाग्छ । एमाले जस्तो ठूलो पार्टीको महाधिवेशमा मञ्च निर्माण होस् वा सहभागीहरुलाई उद्घाटन कार्यक्रममा ल्याउन यातायात व्यवस्था, प्रतिनिधिहरुका खानेबस्ने व्यवस्था खर्च त लागिहाल्छ । अनुत्पादकहो कि भन्नुभयो, हो, अलिकति अनुत्पादक हुन्छन् कतिपय कुराहरु ।
खर्च त अवश्य लाग्छ नै । तर नेकपा(एमाले) संगठित सदस्यमात्रै ८ लाख ५५ हजार४ सय ५३ सदस्य भएको पार्टीले सानोतिनो खर्च ग¥यो भने कुनै अनौठो मान्नु पर्दैन। किनभने सय ÷सय रुपैया मात्रै उठाउँदा पनि ८ करोड ५५ लाख हुन्छ भने, अर्को कुरा सय रुपैयाका दरले हामीले मागेका पनि छौं । नसक्नेले सय दिन्छ, दिनेले यस्तो बेलामा अलिक बढी पनि दिन्छ। महाधिवेशनमा हुन पनि सक्छ ७÷८ करोड खर्च । यो धेरै आश्चर्यजनक कुरा होइन ।
हरेक निकायका आफ्ना सीमाहरु हुन्छन् । हरेक निकाय आफ्ना ती सीमाहरु भित्र बसुन् । हामीले लोकतन्त्रका लागि लडेको यसैका लागि हो । यहीँ मान्यता हाम्रो रहेको छ । तर, नेपालमा फैसला संविधानमा नभएको, संविधानमा लेखिएकोभन्दा विपरित हुन ग¥यो ।
सरकार हेरफेर गर्ने, गठन गर्ने थलो संसद हो । संसदले सरकार गठन गर्छ वा हेरफेर गर्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्छ र हटाउनका लागि पनि संसदले सिफारिस गर्छ । आपूmले निर्णय गरेर त्यो निर्णय सिफारिस गर्छ र राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री हटाइने वा नियुक्त हुने कुरा हुन्छ ।
यहाँ प्रधानमन्त्री हटाइएको संसदले थाहा पाएन । प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री हटाएको थाहा पाएन । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्था र त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री परमादेशबाट हटाइयो । अर्को प्रधानमन्त्री पनि संसदले थाहा नपाइकन निर्वाचित गर्नुपर्ने थलोले, जनताको प्रतिनिधि थलोले, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलोले प्रधानमन्त्री कसलाई नियुक्त गरियो भन्ने पनि थाहा पाएन । र, प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो ।